Sat, Oct 21, 2017 | 12:22:53 NST
नागरिक आवाज SMS बाट
हाम्रो स्याङजा जिल्लामा शान्तिपूर्ण रुपमा नै मतदान सकिएको छ । केही तनाव भएपनि अहिले शान्तिपुर्ण वातावरणमा चुनाव सकियो । जसरी चुनाव शान्तिपूर्ण रुपमा सकिएको छ, त्यसरी नै देशमा सधै शान्ति छाईराखोस् ।
मदन शर्मा, स्याङजा
६ सय १ जना सभासदलाई अग्रिम शुभकामना । जसले जितेपनि हामी जनतालाई संविधान र शान्ति, विकास र रोजगारी उपलब्ध गराई दिनुपर्यो ।
जसमाल धामी, कसुरिया, कैलाली
भोट हाल्दा जुन व्यक्ति संसदमा गएर देश र जनताको भलाई हुने काम गर्छ, जुन पार्टीको नीति नियम राम्रो छ, देश र जनताको स्तर उन्नति हुने खालको एजेण्डा प्रस्ताव राखेको छ । त्यस्ता व्यक्ति र पार्टीलाई भोट हालियो ।
हैन यो निर्वाचन आयोगले कति हेलाँ गरेको ? हामो गाँउमा सबैले नामावलीमा नाम लेखाउँदा पनि नामावलीमा नाम छैन । आयोगको काम त समयमै सबैलाई परिचय पत्र वितरण गर्नु होईन ? आयोगका अध्यक्ष चाहिँ व्यवस्थित निर्वाचनको हुन्छ भन्दै हिँड्ने । यो पनि त आंचारसहिता नमाने सरह होइन ।
दिनेश गिरी, कञ्चनपुर
चुनावको समयमा भोट हाल्न घर आउँदै थिए, गाडी भाडा तेब्बर तिर्नु पर्यो‍ । हामी विध्यार्थीलाई यो बन्दले कहिलेसम्म दुख दिने हो । बसमा मनपरि भाडा लिनेलाई कुनै कार्वाही हुँदैन ?
दिपक पुन, सल्यान
हाम्रो क्षेत्रमा धेरै जना नपढेका उम्मेद्वार चुनाव लड्दैछन् । उनीले जिते भने कस्तो संविधान बनाउलान् ?
बिमास थारु, बर्दिया
नेपाली राजनीतिकमा सत्ता मोह मात्र छ । जनताको मर्म बुझ्ने नेताको जन्म भएको छैन । त्यसलै आफ्नो काम गर्नु वेश होला, पार्टीको झण्डा बोक्नुको अर्थ छैन । चुनाव जसले जितोस् मतलब भएन, मात्र शान्ति र जनमुखी संविधान चाहियो ।
सीता शर्मा, ताप्लेजुङ
नयाँ बन्ने संविधानसभाको चुनावमा आफ्नो अमूल्य मत एक असल र नैतिक उम्मेदवारलाई दिनुपर्छ । पार्टीहरुको लोभ र लालचमा नफसी निर्धक्क भई आफ्नो अमूल्य मतको सदुपयोग गर्नु भन्न चाहन्छु ।
महोम्दी राफी, आबुखैरेनी ६, तनहुँ
केवल चुनावसम्म मात्र हो कि नेताहरुका चिल्ला कुरा हामी जनता भोट कसलाई दिन्छौ ? जसले ६ महिनामा संविधान बनाउFछौ नत्र राजिनामा दिन्छौ भन्छ, भोट चाँहि उसैलाई ।
रमेश दत्त भट्ट, दार्चुला
निर्वाचन प्रकिया पूरा भईसकेको छ र फोटोसहितको मतदाता परिचय पत्र सबैको हातमा पुग्ने क्रममा छ । नाम दर्ता गर्न छुटेका तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनी मताधिकारबाट वन्चित भएका छन । परिचयपत्र नभएकाले सरकारी निकायबाट जारी भएका फोटो सहितको कागजात लिएर भोट हाल्न गए हुन्न र ?
सुवास कुमार महतो, खरायमारा ७ महोत्तरी
रामजी प्रसाद बराल एकीकृत नेकपा माओवादी
रामशरण बस्नेत नेकपा एमाले